नेकपाले भन्यो-ओम सर्जिकलले स्वास्थ्य सामाग्रीमा कालोबजारी गरिरहेको छ, जनकारवाही गर्छौं — onlinedabali.com
नेकपाले भन्यो-ओम सर्जिकलले स्वास्थ्य सामाग्रीमा कालोबजारी गरिरहेको छ, जनकारवाही गर्छौं
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग सम्झौता गरेर समय सीमा भित्र समान नदिने ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रा.लि.ले स्वास्थ्य सामाग्रीमा कालोबजारी गरिरहेको भन्दै कारवाही गर्ने बताएको छ । सरकारले ओम सर्जिकलको कालोबजारीलाई ढाकछोप गर्यो र कारवाही नगरे आफूले गर्ने चेतावनी पुनले दिए ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनले ओम सर्जिकलले गरेको कालोबजारीको सबै सूचना आफूहरुसँग भएको भन्दै सरकारले संरक्षण गरे पार्टीले जनकारवाही गर्ने बताए । ओम सर्जिकलले सरकारसँग गरेको सम्झौताको दुरुपयोग गर्दै चीनबाट समान ल्याएर बुटवाल, कैलाली र इटहरीसम्म कालोबजारी गरेर संकटको अपराध गर्दा पनि सरकार मुख दर्शक भएको पुनले बताए ।
“हामीले विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार आएपछि ओम सर्जिकललाई निगरानी गरिरहेका छौं । उसले सरकारलाई समान नदिएर कालोबजारीमा महंगो बेचिरहेको भेटिएको छ । हामी चाहन्छौं, सरकारले ओमलाई कारवाही गरोस् ।.यदि संकटको बेला पनि कालोबजारी गर्न छुट दिइयो भने हामी जनकारवाही गर्न बाध्य हुनेछौं” पुनले भने ।
नेता पुनले ओम सर्जिकका प्रमुख रामशरण भण्डारीले चीनबाट तीन पटकसम्म स्वास्थ्य सामाग्री ल्याएको सूचना आफूहरुले पाएको तर विभागलाई नबुझाएको भन्दै आपत्ति जनाए । भण्डारीले चीनबाट सामान केही सिधै आफैले बेचेको र ठूलो परिणाममा भाई दलबहादुर भण्डारीले नाममा रहेको भण्डारी अर्जिकलबाट कालोबजारी गरेर देशका विभिन्न स्थानमा पुर्याउँदै आएको नेता पुनले बताए । त्रिपेश्वरमा रहेको गोदाममा समान भएपनि विभागलाई नदिएर भन्दै नेता पुनले जनताले गोदाम कब्जा गर्ने पर्ने समेत बताए ।
विभागसँग भएको सम्झौता देखाउँदै भन्सार छुटमा सामान ल्याउँदै कालोबजारीमार्फत भारतसम्म पुर्याउने गरेको दाबी नेता पुनले गरे । उनले भने, “रामशरणजीले नेपाल संकटको बेला कालोबजारीबाट इटहरी हुुँदै भारतसम्म स्वास्थ्य सामाग्री महंगोमा बेच्नुभएको भन्ने त्यहाँका स्थानीयले हामीलाई सूचना दिएका छन् । हामीले सुक्षम ढंगबाट अध्ययन गरिरहो छौं” नेता पुनले भने ।
ओम सर्जिकल र मेडि कन्सर्नले सम्झौताको समय सीमाभित्र स्वाथ्य सामाग्री तथा उपकरण नबुझाएर कालोबजारी गरिरहँदा पनि रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल (केमसान) मौन बस्नुलाई पनि गम्भीर रुपमा लिएको पुनले बताए । केमसानमा आवद्ध केही व्यवसायीको पनि भण्डारीको कालोबजारीमा मिलेमत्तो भएको आशंक पनि पुनले गरे ।
समय सीमाभित्र सामान नबुझाउने तर खुलाखुला कालोबजारीमा महंगोमा सामान बेच्दा समेत स्वास्थ्य सेवा विभागले निरिह भएको केन्द्रीय सदस्य पुनले बताए । उनले तीनवटा कम्पनीमध्ये एकले बुझाइसक्दा पनि विभागले कारवाही अगाडि नबढाउनु आपत्तिजनक भएको बताए । त्यस्तै उनले समयमै सामान बुझाउने लुम्बिनी हेल्थ केयरलाई धन्यवाद समेत दिए ।
त्यसैगरी कोरोनाले संकट निम्त्याएको बेला नाफाको लागि कालोबजारीमा नलागेर मानवियता देखाउनु पर्ने भन्दै पुनले ओम सर्जिकलसँग मिलेर कालोबजारीमा नलाग्‍न अन्य व्यवसायी आग्रह समेत गरे ।
केही कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर ओम सर्जिकलले मनपरी गरिरहेको समेत पुनले दाबी गरे । त्यस्ता कर्मचारीको सूचना पनि पार्टीमा पुगेको बताए । उपयुक्त समयमा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
ओम सर्जिकलका संचालक भण्डारी विवादित व्यक्ति भएको र त्यस्ता व्यक्तिसँग विभागले सम्झौता गरेकाले समयमै स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध नभएको बताए । उनले विगतमा टेकु अस्पताल र भक्तपुर अस्पतामा सामान खरिद प्रक्रियामा पनि भण्डारीले गरेको बदमासी गरेको बताउँदै हेम्स अस्पतालमा रहेको भण्डारीको लागनी पनि छानविन गर्नपर्ने बताए ।
तर, यो विषयमा ओम सर्जिकलका संचालक भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा उनले कालोबजारी नगरेको बताए ।
५.ओम सर्जिकल स्वास्थ्य सामाग्री दिन असक्षम, धरौटी जफत किन नगर्ने ?
४.स्वास्थ्य सामाग्रीमा बदमासी-२ : डोटेल भन्छन्- विभागलाई नदिएर बिक्री गर्नु अपराध हो, कारवाही हुन्छ
३.काठमाडौँको ओम सर्जिकलसँग कारोबार गरका छैनौंः खड्का
२.स्वास्थ्य सामाग्रीमा बद्‍मासी-२ : सरकारलाई भनेर चीनबाट ल्याएको सामान रातारात धनगढी पुग्यो
१. सम्झौताअनुसार चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामाग्री सरकारलाई दिइएन, बजारमा महंगोमा बेच्दै निजि कम्पनी